के सुनैसुनले बनेको घर हुन्छन् त ? तपाईंले कहिलै देख्नु भको छ, जन्नुहोस र बुझ्नुहोस | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य के सुनैसुनले बनेको घर हुन्छन् त ? तपाईंले कहिलै देख्नु भको छ,...
के सुनैसुनले बनेको घर हुन्छन् त ? तपाईंले कहिलै देख्नु भको छ, जन्नुहोस र बुझ्नुहोस
सुन एक महान धातु हो जसको मतलब यसको क्षय, अक्सीकरण र एसिड प्रतिरोधी हो। यो परीक्षण गर्नको लागि, कालो पत्थरमा तपाईको सुनलाई घोट्नुहोस र छाप छोड्नुहोस् अथवा कलमले छाप बनाउनुहोस। त्यसपछि चिन्हमा नाइट्रिक एसिड लागू गर्नुहोस्। एसिडले कुनै पनि आधार धातुहरू विघटन गर्दछ जुन वास्तविक सुनको होइन।
अर्को कुरा चाहिँ यो हो कि वास्तबमा सुनको घर हुदैन।तपाईंहरुले यदी सुनको फोटो वा भिडियो देख्नुभको छ भने त्यो सुनको होइन, त्यो सुनको रङ्ग मात्र हो भन्ने बुझ्नुहोस। सुनको धेरै थरीथरीका सानो सानो चिज हुन्छन् तर सुनको घर भने हुदैन।यो कुरा याद राख्न जरुरी छ।
सुनको टोइलेट समेत हुन्छ तर घर भने छैनन् ।
यो सबै घरको तस्बिर सुनको होइनन् यो सबै सुन जस्तो देखिने रङ्गको हुुुन् ।
Previous articleप्रधानमन्त्री ओलीले बनाइदिए योगेश भट्टराई निकट सांसदलाई मन्त्री
Next articleपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, र आज – २८ जेठ २०७८ शुक्रवार तपाईंको भाग्य कस्तो छ हेर्नुस् रशिफल